Ashkatooyin laga soo gudbiyay ururka naaziga ah ee NMR - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhowr siyaasiin iyo suxuufiyiin ayaa ku talo jira in ay ashkato xan been ah ka gudbiyaan ururka Naziyiinta ee iska caabinta Nordi-ga (NMR) sawir: BjÃ¶rn Larsson Rosvall/TT
Ashkatooyin laga soo gudbiyay ururka naaziga ah ee NMR
Willy Silberstein:"Waxeey rabaan in ay baqdin ku abuuraan bulshada"
La daabacay måndag 2 oktober 2017 kl 13.00
Dhowr siyaasiin iyo suxuufiyiin ayaa ku talo jira in ay ashkato xan been ah ka gudbiyaan ururka Naziyiinta ee iska caabinta Nordi-ga (NMR).
Sababta ayaa ah sawiro meteleya suxuufiyiinta Alexandra Pascalidou iyo Willy Silberstein. Sawiradan oo lagu qoray ”dembiile” ayey dhowr qof oo ururkaas ka tirsan ku mudaharaadayeen sabtidii ina soo dhaaftay.
Arrinkan ayey dhowr qareen u jeedaan in ay tahay sharci-darro.
Suxuufi Willy Silberstein ayaa qoraalka lagu qoray sawirkiisa u arka hanjabaad uu ururkani doonayo in ay u gudbiyaan isaga.
-Hadii dembiile lagu qoray sawirkeeyga dabeetana lagu mudaharaaday waxaa ay ila tahay in ay i dhaawaci lahaayeen hadii fursad heli lahaayeen, ayuu sheegay Willy Silberstein.
Kennet Lewis ayaa ah qareen ku takhasuusay ashkatooyinka xanta beenta ah ee af-iswiidhishka lagu yidhaahdo förtal. Wuxuu sheegay in hadii sida ururka Naziyiinta ee iska caabinta Nordiga ee NMR xan been ah laga gudbiyo shakhsi la geeystay dembiga xanta beenta.
Sido kale ayuu u jeeda in dhowr qof masuul ka noqon karaan dembigan. Tusaale qofkii daabacay sawirada, kii sawirka ku mudaharaaday, xitaa shirkadii daabacday sawiradan ayuu sheegay qareen Kenneth Lewis. Suxuufi Willy Silberstein ayaa sheegay in ururka naaziga ah ee NMR rabaan in ay cabsi iyo baqdin ku abuuraan bulshadda.